Ịtụle 6 dịrị Ize Ndụ Tupu Ị Were Omume
Dịrị Android pụtara na-kasị elu ùgwù nke ga-ekwe ka ndị ọrụ n'ụzọ zuru ezu ịchịkwa ha ngwaọrụ. A otutu Android ọrụ na-ka na-adọga na ma mgbọrọgwụ ha ngwaọrụ ma ọ bụ. Ọ bụ ezie na dịrị ike maa baara gị uru na-enye a ụyọkọ nhọrọ, mgbe ọ bụla mkpụrụ ego nwere 2 n'akụkụ, ị ka mkpa ịtụle ihe ize ndụ mere site dịrị.
Dịrị dịghị mma ka onye ọ bụla, dị ka ihe ize ndụ pụrụ akarị uru na ị ga-eleghị anya na-akwa ụta maka ihe ndị i mere ngwaọrụ gị, ya mere ebe a bụ ihe mere i ji na-ekwesịghị ime ya.
1. brik na ngwaọrụ gị
E nwere ohere na i nwere ike ida mgbe dịrị na ya nwere ike ime ka gị na ngwaọrụ bricked. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe na-adịgide adịgide brik, ọ ka nwere ike ịbụ a siri ike ọrụ n'ihi na ị.
2. Kwuru Goodbye Gị akwụkwọ ikike
Ka anyị nile maara, ọtụtụ manufactures ga-akpata nsogbu mere site ngwaike na software alterations (dịrị a gụnyere), otú dịrị ngwaọrụ gị karịsịa na-egbu maramara a omenala ROM ga-eleghị anya ndum gị akwụkwọ ikike, na ndị kasị njọ akụkụ bụ manufactures ike ịmata ma gị ngwaọrụ e gbanyere mkpọrọgwụ tupu ọbụna na ị tọgharịa ụlọ ọrụ ntọala.
3. ekwentị gị Nche bụ Na Danger
Ị akwụ ndị kasị elu ùgwù mgbe dịrị, ma n'otu oge, riri mgbọrọgwụ ohere nwekwara ike ịbụ oké nche nke, n'ihi na ọ ga-emeghe ọnụ ụzọ na-achọghị ohere, data ehi ehi na malware pụrụ ọbụna mfe iro ngwaọrụ gị.
4. dịrị adịghị mfe maka onye ọ bụla
Dịrị bụ ka ụdị geek ọrụ, gị mkpa ịmụta a otutu dịrị yiri okwu na aka na dịrị ngwaọrụ. Ọ pụrụ ịbụ otu nke achicha maka ndị ahụmahụ gam akporo ọrụ onye weere ya dị nnọọ dị mfe dị ka wụnye ngwa. Ma beginners, ị pụrụ ịhụ onwe gị na a Pịkụl.
5. ngwaọrụ gị Ga-eji ndiiche bụrụ na ọ bụghị ya nke ọma
Nke a tumadi itịbe maka beginners ndị na-adịghị maara na dịrị usoro, i nwere ike mere ka ụfọdụ ndudue n'oge dịrị ma na-aghọta ya. Ọ ga-eme ka gị na ngwaọrụ omume ndiiche ma na ị nwere Flash a ọhụrụ ROM ka na mgbagwoju anya maka beginners.
6. Debe Onwe Gị Site Inweta Mkpa mmelite si OEM
Mgbe gbanyere mkpọrọgwụ ngwaọrụ gị, i nwere ike na-wụnye ọhụrụ mmelite si gị OEM ruru ka software mgbanwe mere. Ọbụna ị na-emelite ịga nke ọma, ọ pụrụ wepụ dịrị na ị na-ata ahụhụ ihe ize ndụ na mgbọrọgwụ ngwaọrụ ọzọ.
Anyị na-ebughị n'uche mmenyenjo gị banyere dịrị ma ọ bụ kụziere gị dịrị bụ na-abaghị uru na nke jupụtara n'ihe ize ndụ, anyị dị na-atụ anya ka ị mara, ezi ihe nile na-abịa mgbe a price na ị bụ onye na-eme mkpebi ikpeazụ. Ya mere, biko tụlee ihe ndị dịrị ize ndụ tupu gị n'ime omume, na-ịchọrọ ị na-enwe obi ụtọ Android ndụ.
Mgbọrọgwụ akporo ekwentị / Tablet Iji n'ụzọ zuru ezu akara gị Android Life